Nhamba dzekudyara dzinogona kukubatsira sei? | Ehupfumi Zvemari
Mifananidzo chikamu chakakosha kwazvo pakuongorora kwehunyanzvi. Ose ari maviri kutenga nekutengesa, zvisina kujeka. Kugadzira zano rine vateveri vazhinji pakati pevashoma nepakati varimi. Iwe unogona kunge wakamboshandisa zvimwe zvezviverengero izvi gadzira yako portfolio yekudyara. Nekuti zvirokwazvo, kana paine humwe hunhu hunotsanangudza, ndiko kuvimbika kwakakwirira kunogadzirwa neiyi fomu yekuongorora. Mune chengetedzo, zvikamu, indices uye chero hupfumi hwemari ndicho chinhu chekuita kwako mumisika.
Iko kusakosha kukuru kwekushandisa aya akakosha matekiniki ekuita mari ndeyekuti ivo vanoda ruzivo rwakadzama rwekuti maumbirwo uye simba rekuzviona. Haasi chero mushambadzi anogona kuwana urwu ruzivo rwakakosha. Iwe uchafanirwa kuve uine mashoma masosi muzvidzidzo zvavo. Yakakura kusvika padanho rekuti iwo manhamba akaomesesa uye nematambudziko akakura kuabata. Kwete pasina, ichave yakakosha rutsigiro kune chiteshi mashandiro ane makuru anovimbisa ebudiriro. Kunyangwe pamusoro pedzimwe nzira dzakasarudzika.
Saka kuti iwe uve neruzivo rwakakodzera iwe unofanirwa kunyatsoteerera kumakosi ari kuvandudzwa. Mazhinji acho akasununguka uye haagare kwenguva refu. Kusvika pakuti unogona kusanganisa nebasa rako kana zvidzidzo. Asi zvichave zvichinyatso kudikanwa kuti iwe uzviise muchimiro kuitira kuti mune yakati rebei kana shoma nguva iwe ushandise dzidziso yavo kune ako ekukurumidza mashandiro. Kana zvirinani kuburikidza nema simulators mumisika yemari.
1 Mifananidzo: mabhenefiti avo pamusika wemari?
2 Chenjedzo nezve maitiro shanduko
3 Kuchengetedza maitiro
4 Chii chaunogona kuwana nemanhamba?
5 Pasi nemitengo yedenga
Mifananidzo: mabhenefiti avo pamusika wemari?
Kune akawanda mafomu aunogona kupa kune chero emamwe manhamba anoratidzwa mumitengo yemisika yemasheya. Ichashanda se chinhu chakakosha mukuwongorora kwako. Kuti uite izvi, unofanirwa kupa komputa ine simba-refu iyo inogona kutsigira zvirongwa zvekugadzira ichi chakakosha chinhu chehunyanzvi kuongorora. Zvekuti kubva panguva ino iwe uri mune yakanakisa mamiriro ekuita ako ekudyara nzira. Iri richava basa rinozotora mazuva mashoma, asi nekukasira mhedzisiro maererano nekuzadzisa zvaunoda.
Nenzira iyi, unogona kugadzirisa zvirinani mitengo ye tenga utengese. Zvekuti kudzoka kwemabasa kunogutsa kubva zvino zvichienda mberi. Uye zvakare, iwe uchave uine zvirinani zvivimbiso nezve kubudirira kwekuvhiya. Ichave imwe yedzakanakisa nzira dzekutarisana nekufamba kwako mumisika yequity. Iwe unoda here kushandisa iyi nzira mukudyara izvozvi?
Kune rimwe divi, iyo inokupa iwe anodiwa masaini ekuvhura kana kuvhara matengesi pamusika wemusika. Kunyangwe iri iyo yakanyanya kunaka kutenga masheya kana kana pane zvinopesana sarudzo yakanakisa yaunayo ndeye kukuchengeta iwe mukushomeka. Neiyi nzira, iwe unongoisa mari yako kana zvichinyanya kudikanwa. Nekuti iwo manhamba anokupa iwe zvinonyanya kusefa mafirita kusarudza akanakisa tsika nguva dzese. Nesarudzo dzakajeka kwazvo dzekutenga uye kuti muzviitiko zvakawanda hazvingagadzi matambudziko akawandisa mukuvandudza kufamba.
Chenjedzo nezve maitiro shanduko
Rimwe remabasa emasheya emusika wechitoro ndeyekuti iwe unogona kuona zviri nyore shanduko mune zvinoitika mumatengo emitengo. Zvese zvine chekuita neshanduko kubva kumusoro kuenda kune yakasarudzika, uye nenzira yakatarisana. Nekuti ivo vachakubatsira iwe kuwana iyo kuisa uye kubuda mazinga yemisika yemari. Nedhigirii reruzivo rwunopfuura kukwirira. Zvirinani pamusoro pedzimwe nzira dzakasiyana. Icho chinhu chauchazokwanisa kuongorora kubva pakutanga kwekuvhiya.
Tichifunga nezvekuchinja kwemaitiro kuri kugadzirwa, uchave nerubatsiro rwakakura kutora mukana weichi chakakosha chimiro. Nekuti mukuita, haufanire kutora danho chero risiri iro rinogona kukanganisa mashandiro ako mumisika yemari. Kuve iri zano rinonyanya kubatsira re yepakati uye yakareba nguva yekugara. Kusvika padanho iwe raunowana zvirinani kudzoka pane chengeto pane pakutanga zvaifungidzirwa Uye zvinonyanya kukosha, kune chero mhando chengetedzo. Hapana kunze kwemhando ipi neipi.
Nekuti izvi ndizvo, iwo manhamba anogona kushandiswa mune chero yemari nhumbi. Kubva pane zvetsika zvekutenga nekutengesa mashandiro pamusika wekutengesa kusvika zvimwe zvigadzirwa zvemari zvakanyanya kuwedzererwa mumafungiro avo. Mune simbi dzinokosha, mbishi zvinhu kana chero mari (Swiss franc, British pondo, dhora uye nedzimwe mari dzekunze) zvinosanganisirwa. Sezvauri kuona, iko kushanda kwehuwandu hakuna miganho. Nechinodikanwa chete kuti chive chengetedzo chakanyorwa mumisika yemari.
Zvakare manhamba ekutsigira ako sarudzo. Nekuti ivo havawanzo kuratidza kushanduka kamwe kamwe mukuita. Asi, pane zvinopesana, ivo vanogona kupa isinganzwisisike chiratidzo nezve yekuchengetedza kweiyo maitiro. Be bullish kana bearish, izvi zvakazara zvakasununguka. Chero zvazvingaitika, iri rutsigiro rukuru kuti unofanirwa kuenderera nenzvimbo dzako mumisika yemari. Hazvishamise kuti mamwe manhamba anogona kubatsira zvakanyanya kune anochengetedza maitiro.
Kubva pane ino mamiriro, inogona kuve yakakosha poindi rejisiti yekuvandudza mashoma-epasi mashandiro. Kunyangwe mukufamba kunoitwa mune imwecheteyo yekutengesa chikamu. Sarudzo inodiwa kwazvo nevatengesi. Vashandi vanopinda uye vanobuda mumisika yemari kazhinji. Nekuti inokutendera iwe kusimudzira zvakanyanya kukurumidza kudyara iyo inogona kukupa iwe yakakosha capital kuwana. Kana iwe uri muzvinashawo weaya maitiro, iwo manhamba anokura mumitengo yemasecurity anogona kukupa iwe unopfuura mufaro mumwe kubva zvino zvichienda mberi.
Naizvozvo, iwo anoshanda ese ari maviri mashandiro ehunhu hwekufungidzira uye iwo akagadzirirwa chimiro chemushambadzi panzvimbo pekutarisana nenzira dzakachengetedzeka kana dzekudzivirira. Muzviitiko zvese izvi, ivo vanokupa iwe nemasaini akakodzera ekutanga mashandiro mumisika yemari. Izvo zvinogona kutotsigirwa nemamwe ma parameter mune ruzivo. Kunyangwe chiri chishuwo chako chakabatanidzwa nekukosha kuongorora. Nekuti kuchinjika ndeimwe yemipiro yayo yakakosha.
Chii chaunogona kuwana nemanhamba?
Muzviitiko zvese, iwo manhamba anoumbwa kuburikidza nemitengo yemasheya anounza akateedzana mabhenefiti anogona kubatsira zvakanyanya kune zvaunofarira seavhareji investor. Nenzira yeakanyatso tsanangurwa hunhu uye kuti iwe unogona kuwana kuburikidza neanotevera zviito isu isu kukufumura iwe pazasi.
Ivo vanokupa iwe iro danho kwaunofanirwa pinda muzvikwereti. Saka kuti usarase chikamu cheiyo nzira yekumusoro inogona kusimuka kubva pane yakapihwa nguva. Nenzira iyi, kudzoka kwacho kunenge kwakafara zvakanyanya kupfuura mune mamwe mamiriro apo nhamba dzemusika wemasheya dzisipo.
Chichava chinhu che ongororo yakavimbika kwazvo uye kwete zvichibva pakufungidzira kana kumwe kufamba kusiri kugadziridzwa kune chokwadi chemisika yemari. Chichava chishandiso chinokupa kutendeseka kukuru kune mashandiro aunotanga.
Iri izano rinorayirwa, zvese mukureba kwenguva uye mukureba kwazvo. Kunyangwe kukudziridza mashandiro akati wandei mune imwechete yekutengesa chikamu. Hazvishamise kuti iwo manhamba ane akawanda mashandisirwo uye zvirokwazvo kupfuura zvaunogona kufungidzira panguva ino.
Mupiro waro wechokwadi uri muchokwadi chekuti iwe fungidzira mafambiro yemari yemari. Chero zvazvaive uye neepamusoro chaiyo yekuteerera Pamusoro pedzimwe nzira muhunyanzvi kuongorora. Iwe unongofanirwa kuchinjika kune avo akakosha marongero mukuita.
Iwo manhamba iwe aunogona kuwana mukugadzirwa kwehunyanzvi haaverengeke uye e zvisikwa zvakasiyana-siyana. Zvese zvinorehwa uye zvemhando dzese dzemapepa profiles. Kubva pane ine hukasha kusvika munzira dzinochengetedza. Izvo zvinoenderana nemamiriro ese aunogona kupa chero nguva.
Pasi nemitengo yedenga
Imwe yemabhenefiti yakapihwa neiyi yekudyara modhi ndeyekuti inoratidza pasi uye siringi zvine huchokwadi hwakanyanya mumutengo wekutora. Pamatanho uko kumusoro uye kwakadzika maitiro mune akachengetedzwa akachengetedzwa anomira nekukurumidza. Kuburikidza nenhamba sehunhu pakati pevashambadziri seiyo uriri huviri uye siringi. Ivo vanoenda zvakatowanda nekunongedzera mamwe anowoneka manhamba mune kwavo kuongororwa, senge katatu pasi uye siringi. Chero zvazvingaitika, mapoinzi ezvekukosha kwakakosha kwenhamba huru yevarimi vanoisa marongero avo pane yakasarudzika yehunyanzvi yekuongorora fomati.
Kubudikidza nezvipo zvese zvatakatsanangurira kwauri, iwe zvino uchave uine paramende nyowani kuitira kuti iwe ugone kuita kuti zvinhu zvako zviwane purofiti pamwe nezvivimbiso zvikuru zvekubudirira. Nekuti iwe unogona kuishandisa mune ese mashandiro aunoda, kunyangwe uine musiyano mune dzinopfuura nzira dzakakurumbira. Kuve chishandiso chinoshanda kwazvo icho chichava chako mune chero kirasi yemari midziyo. Iko, iwe uchave unokwanisa kusarudza kubva kune akasiyana siyana manhamba. Zvese zvakasikwa uye kune ese mafambiro aunogona kuita. Iwe unongofanirwa kusarudza iwo anonyatsoenderana neprofile yako sevatengesi vevatengesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Nhamba dzekudyara dzinogona kukubatsira sei?
Maitiro ekumhan'arira Adsense mari